ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ တိုးမြှင့်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ကန့...
15 มี.ค. 2563 - 10:50 น.
(၁) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ တိုးမြှင့်
ကမ္ဘာတဝန်းက နိုင်ငံတွေကို ပြန့်နှံ့လာနေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စပိန်နိုင်ငံမှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အိမ်ပြင်မထွက်ကြဖို့ အရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး ဝယ်ဖို့ပဲ ထွက်ကြဖို့နဲ့ အလုပ်သွားမယ့်သူတွေပဲ အပြင်ထွက်ကြဖို့ ဝန်ကြီးချုပ် ပတ်ဒရိုဆန်းချက်စ်က ညွှန်ကြားနေပါတယ်။
စားသောက်ဆိုင်တွေအနေနဲ့လည်း မှာသူရှိရင် အိမ်တွေကို တိုက်ရိုက်ပို့ဖို့ ပြောပါတယ်။ ဘဏ်တွေနဲ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေကိုတော့ ဖွင့်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူအများဆုံး နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ အီတလီ၊ အီရန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေပြီးရင် စပိန်နိုင်ငံက ၅ နိုင်ငံမြောက် အများဆုံး စာရင်းမှာ ပါနေပါတယ်။
စပိန်မှာ ကူးစက်သူကတော့ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ၆၃၉၁ ဦးနဲ့ သေဆုံးသူက ၁၉၅ ဦး ရှိပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ရေး ကန့်သတ်ချက်သစ်တွေ ကြေညာ နေပါတယ်။
"ကူးစက်မှုများပြားလာတဲ့အတွက် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ကစပြီး ကော်ဖီဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို ပိတ်ဖို့" ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ် Édouard Philippe က အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။
ဘုရားဝတ်ပြုရာ ကျောင်းတွေကိုတော့ ဖွင့်ထားပေးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် လူစုလူဝေးအနေနဲ့တော့ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တွေပဲ ဖွင့်ခွင့်ပြုမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာတော့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု အတည်ပြုလူနာ ၃၆၀၀ လောက်ရှိနေပြီး သေဆုံးသူက ၉၁ ဦး ရှိနေပါပြီ။
ပြင်သစ်မှာ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားတွေ လည်ပတ်နေရာတွေကို ပိတ်ပင်ထား
ဗိုင်းရပ်စ် ဆိုးဆိုးရွားရွာ ကူးစက်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ အီတလီမှာတော့ ကူးစက်သူ ၂ သောင်း ၁ ထောင်ကျော်နေပြီး သေဆုံးသူကလည်း ၁၄၀၀ ကျော်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘာလင်မှာလည်း လူ ၅၀ ကျော် စုရုံးတာကို ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
ဆိုင်တွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ပိတ်ထားပေမယ့် စားသောက်ဆိုင်တွေကိုတော့ ခွင့်ပြုထားဆဲပါ။ ဂျာမနီမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူ ၃၇၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်အာဖရိက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူပေါင်း နောက်ထပ် ၁၄ ဦးရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အာဖရိကတိုက်အတွင်းက နိုင်ငံပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၈ နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့ပွားမှုတွေ ရှိနေပြီး မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တုန်းက ကင်ညာ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဆူဒန် နိုင်ငံတွေမှာ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာလည်း ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ကူဝိတ်နဲ့ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေ အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သလို အာရပ်စော်ဘွားများနိုင်ငံကတော့ လက်ဘနွန်၊ အီရတ်၊ ဆီးရီးယားနဲ့ တူရကီနိုင်ငံတွေဆီ ပျံသန်းတဲ့ လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အာရပ်စော်ဘွားများနိုင်ငံတွေဆီ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတွေကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ကာတာနိုင်ငံကလည်း ဥရောပနိုင်ငံသားတွေကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ မပေးတော့ပါဘူး။ ပြည်ပခရီးသွားတွေ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရာ နေရာတွေကိုလည်း ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အီဂျစ်နိုင်ငံကလည်း မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ကစလို့ ကျောင်းတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေက သင်တန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။
သမ္မတထရမ့်ကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ ဥရောပဘက်ကနေ ဝင်လာသူတွေရဲ့ ခရီးလမ်းကြောင်းတွေကို တိုးချဲ့ပိတ်ပင်တဲ့အထဲမှာ ဗြိတိန်နဲ့ အိုင်ယာလန်တို့ကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒုသမ္မတ မိုက်ခ်ပန့်စ်က ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ စတင်လုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အမေရိကားကို ပြန်လာကြတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်း သတ်မှတ်တဲ့ လေဆိပ်တွေကပဲ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပြည်တွင်းခရီးသွားလာမှုတွေကိုပါ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရအနေနဲ့ စဉ်းစားနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ သမ္မတထရမ့်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ သမ္မတအိမ်ဖြူတော်က မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြု ပြောလိုက်ပါတယ်။
အစောပိုင်းတုန်းကတော့ သမ္မတထရမ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာ ရှိမရှိ ဆေးစစ်ခံထားပြီး အဖြေကို စောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
သမ္မတ Trump နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သူ ၃ ယောက်ထက်မနည်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေတာ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဆေးစစ်ခံဖို့ မကြာသေးခင် အချိန်အထိ လက်မခံဘဲ ငြင်းဆန်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူ ၂,၂၂၆ ဦး အတည်ပြုထားပြီး သေဆုံးသူက ၅၁ ဦး ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ ၂ ဦးနဲ့ စောင့်ကြည့်လူနာ ၁၁၆ ဦးရှိပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းပေးပို့ပြီး စစ်ဆေးချက် ယူထားတဲ့ လူနာက ၄ ဦး ရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
(၂) Covid-19 ကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ကျွဲ၊ နွား ဈေးကွက်ကို ရိုက်ခတ်
Covid-19 ကူးစက်မှုတွေကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်က အဓိကကျတဲ့ ကျွဲ၊ နွား ဈေးကွက်မှာ အရောင်းအဝယ် အရင်ကလောက် သိပ်မဖြစ်တော့ဘဲ ဈေးထဲမှာလည်း ကျွဲ၊ နွား အကောင်ရေ နည်းနည်းလောက်ပဲ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
"ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကျွဲ၊ နွားတွေကို ပြည်ပကို တင်ပို့လို့ မရတော့ဘူး၊ အဓိက တင်ပို့နေရတဲ့ တရုတ်နဲ့ ဗီယက်နမ်ကို မပို့ရတော့ ဈေးကွက်က ငြိမ်နေတယ်၊ အသားပေါ်ရောင်းတဲ့သူတွေကိုပဲ ဟိုတစ ဒီတစ လိုက်ရောင်းနေရတယ်" လို့ ထိုင်းကုန်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အရင်က ဒီဈေးထဲမှာ ကျွဲ၊ နွားတွေ ပြည့်နေတာကို မြင်ရလေ့ရှိတယ်လို့ ဘီဘီစီသတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
မဲဆောက် ကျွဲ၊ နွား ဈေးကွက်ကို နယ်စပ်ဝင်ပေါက်ကနေ တစ်ပတ်ကို ကျွဲ၊ နွား အကောင်ရေ ၂ ထောင် လောက်ဝင်ပြီး ဘတ်ငွေ သန်း ၁၀၀ ကျော်ဖိုး အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် တစ်ပတ်ကို အကောင်ရေ ၅၀၀ ကျော်လောက်ပဲ ဝင်ပြီး ဒါတောင်မှ အားလုံး ရောင်းမကုန်ဘူးလို့ ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။
ဒီအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ကျွဲ၊ နွား တင်ပို့သူတွေကိုလည်း အခက်တွေ့ရတယ်လို့ မြန်မာကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ထိုင်းကနေ မြန်မာကို တင်ပို့နေတဲ့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ၊ အေးခဲ ကြက်သား၊ ကြက်ကလီစာ၊ ဝက်သား၊ ဝက်ကလီစာ၊ မွေးမြုရေးငါး၊ ပုစွန်၊ ဟင်သီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ အသင့်စား ဆီသွတ်ဗူး၊ နို့ဗူး၊ အချိုရည်မျိုးစုံ၊ မုန့်မျိုးစုံတွေက ပုံမှန်အလုပ်ဖြစ်နေပေမယ့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတချို့တော့ ရောင်းအားကျတယ်လို့ မဲဆောက်ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။
(၃) ကျောက်တော်မှာ ကျေးရွာတချို့ မီးလောင်ခဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပြိုင်းတိုင်းကျေးရွာဟာ အိမ်ခြေ ၂၅၀ လောက်ရှိတဲ့ ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီရွာက ဗွိုင်လာ ဆန်စက်ကြီး ၂ လုံး၊ ကျောင်း၊ ကား ၁၀ စီး အပါအဝင် နေအိမ်တွေကို မီးလောင်ခဲ့ပြီး ဘုန်းတော်ကြီး တခြမ်းလည်း မီးထဲပါသွားခဲ့တယ်လို့ ကျေးရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
အသက် ၈၀ ကျော်နဲ့ ၆၀ ကျော်အရွယ် အဘို ၂ ဦးနဲ့ အသက် ၈၀ အရွယ် အဖွား ၁ ဦးတို့ မီးလောင်မှုထဲ သေဆုံးခဲ့ရတာတယ်လို့ ပြိုင်းတိုင်းရွာက ထွက်ပြေးလာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရက္ခိုင့်တပ်တော်နဲ့ တပ်မတော်အကြား တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီး မတ်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျည်ထိမှန်လို့ ပြိုင်းတိုင်းရွာက သေဆုံးသူ ၈ ဦးရှိပြီး ဒဏ်ရာရသူက ၁၂ ဦးရှိပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေအတွင်း ရွာတွေမီးရှို့ခံရတာ၊ အရပ်သားတွေ သေဆုံး ဒဏ်ရာရနေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက တပ်မတော်အနေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ကလည်း ကျောက်တော်မြို့နယ် မာလာရွာက ရွာသား ၆ ဦးနဲ့ တင်းမရွာက ရွာသား ၈ ဦးတို့ကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခေါ်သွားပေမယ့် အခုထိ အဆက်အသွယ်မရသေးလို့ စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ တိုးမြှင့်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ